အာရှဖိတ်ခေါ်အမျိုးသမီးဂေါက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီမြို့သာဂေါက်ကွင်း၌ ပထမဦးဆုံးလ? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ စက်တင်ဘာ ၂၂- နိုင်ငံ တကာခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်သော Golf Tournament Event တစ်ခုအဖြစ် မြို့သာဂေါက်ကွင်း (Myotha National Championship Golf-Course) တွင် အာရှဖိတ်ခေါ် အမျိုးသမီးဂေါက် ရိုက်ပြိုင်ပွဲကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
”ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင် နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပပြု လုပ်တာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲမှာ အာရှ နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နဲ့ ဖိ လစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေက ကလပ်အသင်း တွေက အမျိုးသမီးဂေါက်သီးရိုက် အားကစားသမားတွေ ပါဝင်ယှဉ် ပြိုင်ကြမှာပါ။ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းမှာ ဂေါက်ကွင်းရဲ့Soft Opening အခမ်းအနားပြီး တာနဲ့ ပြိုင်ပွဲကိုစတင်ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲပြီးတာနဲ့ ဂေါက်ကွင်း ကို အောက်တိုဘာ ၈ ရက်အထိ ယာယီပိတ်ထားမှာဖြစ်သလို ကွင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အမေရိ ကန်ပညာရှင်အဖွဲ့ကနေ ပုံမှန် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ လက်ရှိ အာရှက ဂေါက်ကွင်းမှာအဝေးဆုံး ရိုက်ချက် ကိုက် ၂၈ဝ အထိရှည် လျားတာကြောင့် နိုင်ငံခြားသား အားကစားသမားတွေ နှစ်သက် သဘောကျမယ့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်”ဟု မန္တ လေးမြို့သာ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်သူ ဦး ထွန်းရင်က စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ မြို့သာဂေါက် ကွင်းကို စက်မှုဥယျာဉ်(မြို့သာ) စီမံကိန်းအတွင်းရှိ မြေဧက ၃၈ဝ ပေါ်၌ သဘာဝရေအိုင်၊ လျှိုမြောင်၊ ချိုင့်ဝှမ်း၊ တောတန်းတို့ နှင့်အတူ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ရာ အာ ရှနိုင်ငံများတွင် စိုက်လေ့စိုက်ထ မရှိသော Zerom မြက်အမျိုးအ စားကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပထမ ဦးဆုံးမှာယူအသုံးပြုထားကြောင်း၊ အဖွဲ့လိုက်လာရောက်ကစားလိုသူ များအနေဖြင့် တစ်ပတ်ကြိုတင်စာ ရင်းပေးသွင်းထားနိုင်ပြီး တစ်ဖွဲ့ လျှင် လေးဦးသာကစားရမည်ဖြစ် ကာ ကွင်းအရည်အသွေးပိုင်း ရေ ရှည်တည်တံ့စေရန်အတွက် တန င်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သော ကြာနေ့တို့တွင် ခုနစ်ဖွဲ့၊ စနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့တို့တွင် ရှစ်ဖွဲ့အထိ သာ အများဆုံးလက်ခံကစားခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပညာရေးကောလိပ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာဆက်လက်သင်ယူရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝန်ကြီးဌာနနှင်?
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်မှုများတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုံနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပ?
ဂျပန်အခြေစိုက် အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ် ပျံသန်းနေစဉ် မီးစွဲလောင်
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းကြောင့် လူသူ အရောက်နည်းသော မုလအိစေတီ သွားရာလမ်းပိုင်း ပြုပြင